Ndege yeBangladesh inoita kumhara nechimbichimbi muBangkok
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Ndege yeBangladesh inoita kumhara nechimbichimbi muBangkok
Bangkok - Imwe ndege inodhura yeBangladesh yakamanikidzwa kumhara nechimbichimbi muBangkok neChipiri mushure mekunge mumwe wevatakuri aita nenzira yekutyisidzira, mishumo yenhau yakati.
Ndege yeGMG Airlines 042 kubva kuKuala Lumpur kuenda kuDhaka, yakamhara nechimbichimbi paBangkok's Don Mueng Airport nguva pfupi yapfuura 10 am, vakuru venhandare yendege vakadaro.
Ndege iyi, inonzi yakamanikidzwa kumhara nechimbichimbi muBangkok mushure mekunge mutakuri weBangladeshi atyisidzira vashandi vendege, Thai TV yakashuma. Murume uyu akaendeswa kunobvunzurudzwa.
Zviremera zveThailand hazvina kuwanikwa pakarepo kuti zvijekese zvakanga zvaitika mundege.
Vatyairi vendege vakatanga vakumbira kumhara nechimbichimbi paSuvarnabhumi Airport, nhandare yendege yeBangkok, asi vakuru vendege vakavakumbira kuti vamhanye paDon Mueng, yava nhandare yendege.
nhandare yendege Bangkok Bhangiradheshi Kuala Lumpur
Ndege yakapindira nemazano, dare rinoti
China inorambidza mavhiza evashanyi kumaOlympics eBeijing
Kukwidzwa kweSKAL International kune Vadiki Zviwanikwa...